Fihetseham-po amin'ny vanin-taona mafana amin'ny fitiavana Luching Ruching Front Yellow One Piece Womens Swimwear
Ny Swimsuit antsika dia mamirapiratra amin'ny alàlan'ny fihodinana an-tsokosoko tia curve; ~ Fonosana maivana ho an'ny fanohanana sy famolavolana.
Milahatra feno vehivavy milomano haingon-damba roa voafantina Tummy Control Monokini
Womens akanjo roa nohetezan'ny akanjo baoty mifehy monokini. Akanjo baoty iray amin'ny vozony ity naseho tamin'ny sary nohetezana eo anoloana sy any an-kibony, miaraka amin'ny fehin-tsoroka azo zahana criss cross-lace. Ity palitao avo ity dia miakanjo akanjo fandroana iray namboarina tamin'ny tongotra ambany voapaika ho an'ny pataloha. Ity tarehimarika mendri-piderana endrika lava ity dia akanjo fitondra fanaraha-maso tummy ho an'ny tena mety amin'ny bikan'ny vatanao! Ity akanjo mamirapiratra Retro miloko volom-borona akanjo lava ity dia mahafatifaty sy kanto.
Detachable Pad Smooth One Piece Pin Up Swimsuit Ho an'ny Vehivavy
【Lamba ambonimbony】MORA KELY HAIZA, AZO ATAO DIA MBOLA HANDINIKA. Ny akanjo ba iray ho an'ny vehivavy dia vita amin'ny polyester sy spandex, izay lamba fanamainana malemy haingana. Malama, manitatra, mahazo aina ary maharitra mandritra ny fotoana lava anaovana.
Sora fandroana miloko miloko miloko S-XL milomano ho an'ny morontsiraka
Fitaovana: nylon 80%, spandex 20%. Sasao mangatsiaka ny tanana, ahantona mba ho maina. Kalitao tsara sy mahasoa rehefa mitafy azy ianao.
Fehin-kambana roa azo ovaina amin'ny akanjo milomano vehivavy miadana izay azo esorina
Swimsuit iray monja
~ Amin'ny lamba matte malama
~ Manify sy manalefaka ny vavony sy ny valahany
~ Ny lamba mifanaraka tsara sy tery amin'ny famolavolana
~ Allover mikororosy fahitana ary manafina
Multi miloko matevina M-XXXXL fisaka fisaka vita amin'ny lamba milomano malefaka
· Lamba tonga lafatra ho an'ny fampihetseham-batana avo lenta.
· Ny takelaka misy endrika misy stitching mifanohitra no mamoaka ny endrika tsara indrindra amin'ny toetranao.
· Elastika avo amin'ny fehikibo
Lamba maharitra maharitra tsy miovaova amin'ny akanjo milomano misy akanjo lava
Fanamainana haingana haingana amin'ny tongotra an-tongotra milomano jammer ho an'ny fampiofanana sy ny hazakazaka.
Kitapo milomano manaitaitra milentika malefaka ho an'ny lehilahy
Manomboka amin'ny baoty milomano sy tongotra toradroa ka hatramin'ny jammers dia manana zavatra isaky ny tiany isika, isaky ny ambaratonga, ary ny atleta rehetra. Ny teknikan'ny fananganana tsy manam-paharoa sy ny fitaovana fanapahana dia midika hoe ny akanjo fitondra milomano dia hitazona anao mandrakotra sy mahazo aina amin'ny pisinina, amoron-dranomasina na farihy.
100% Nylon vita printy Swiming Mens Swim Shorts ho an'ny pataloha fohy
Valahana feno elastika sy fanidiana fanidiana
Mesh milahatra anatiny raha mahazo aina
Ny paosy am-paosy sy ny paosy any aoriana dia manome safidy betsaka amin'ny fitehirizana
Ho an'ny surf, lomano, hetsika amoron-dranomasina, fanatanjahan-tena, hetsika any ivelany sns